Uhlalutyo lwesiza kunye ne-Arhente yedigital ye-Semalt
Iingcali zeSemalt zibonelela ngeendlela ezintathu zomkhankaso we-SEO kubathengi-I-AutoSEO, i-FullSEO, kunye nemikhankaso yoHlaziyo. Ngaphambi kwephulo ngalinye, ingcali yethu ye- SEO iya kuphonononga ngokupheleleyo izibonelelo ze-intanethi zemigangatho yokuthobela uyilo lwewebhu kunye nohlalutyo lwe-SEO.
Umkhankaso wethu we-AutoSEO ubonelela ngohlalutyo oluphezulu lwesitolo se-intanethi somthengi sokusebenza kweinjini yokukhangela. Iphulo elipheleleyo le -SESEO libandakanya uluhlu olubanzi lokuhlalutya ukunceda ishishini ukuba likhule ngokubakho kwe-Intanethi ngexesha elifutshane. Ngelixa, uMkhankaso weAnkqubo yokuhlaziya unikezela ngohlalutyo oluphezulu lwewebhusayithi yabathengi.
Ngexesha lePhulo lokuCubungula, sihlaziya iwebhusayithi yabathengi kwaye sisebenze kunye nenkampani yakho ukuqinisekisa impumelelo kwi-Intanethi. Ngalo lonke uMkhankaso woHlaziyo, uhlalutyo lwethu lwe-SEO luya kusebenza nenkampani yakho yonke inyathelo lendlela. Sinikezela ngengxelo epheleleyo yokuhlola imisebenzi ephambili kwiwebhusayithi yakho, kunye neengcebiso zokuthatha indawo yakho kwindawo kaGoogle TOP.
Yintoni ukubonakala kwewebhusayithi?
Ukubonakala kwewebhusayithi yinkqubo yokufumana iwebhusayithi efumaneka kwi-injini yokukhangela ephambili njengeGoogle. Ukubonakala kwewebhusayithi kugqitywa ngenani eliphezulu lezixhobo ngaphakathi kwesiza esikhokelela kwimibuzo ephambili; imiboniso yangoku emisela inani lendawo ebonisiweyo ngaphakathi kweinjini yokukhangela ezinikiweyo; kunye nedatha ngokubanzi kwiwebhusayithi ebandakanyekayo ukuyifumana ibekwe kwi-injini yokukhangela.
Ukuphindaphindwa kombuzo wenjini yokukhangela kugqitywa ngendlela abasebenzisi rhoqo abuza ngayo umbuzo othile kw injini yokukhangela. Oku kubalwa ngenani leemboniselo ngaphakathi kwenyanga enikiweyo. Isikhundla kwi-SERP ngumgca wephepha elithile lewebhusayithi liwela xa ubekwa ngaphakathi kombuzo. Ukuqiniswa kwesithuba kuxhomekeke kwinto ebizwa ngokuba "luxinano lwengqwalaselo", ebonisa umgca iphepha lokubonisa likwi. Lo mgangatho ubalwa ukumisela umgangatho wekhonkco
Iingcali ze-SEO zikaSemalt zinganceda iwebhusayithi yakho ukuba yandise ukubonakala kwenjini yayo. Xa usenza uhlalutyo olupheleleyo lweSayithi, sikhetha utoliko oluchanekileyo olufuna ukwenziwa. Kwezinye iivenkile ezikwi-intanethi, indawo yazo ibalulekile ukunceda ukwandisa ukubonakala kwewebhusayithi yazo. Ke, sikhankanya indawo yabo kwiphepha labo lasekhaya. Nangona, ezinye i-niches, i-semantics ibaluleke ngakumbi. Ke, sithatha indlela enzulu ejolise ekuphuculeni ukusebenza kweinjini yokukhangela. Nje ukuba oku kuqiniseke, iingcali kwa-Semalt ziya kuqinisekisa ukuba zithathe eyona ndlela incedayo yokunyusa inani lamagama aphambili kwiwebhusayithi yakho ukuqinisekisa ukuba uyaphumelela.
Xa usebenza kunye ne-SEO, kukho izinto ezintathu ezibalulekileyo:
Rhoqo: Oku kubonisa ukuba mangaphi ngenyanga umtyeleli engena ibinzana elithile kwibha yokukhangela. Ukuphakama kwefrikwensi, abantu abangaphezulu baya kufumana ubutyebi bewebhu abanikiweyo yi-SERP ephezulu.
Inguqu yipesenti yenani labatyeleli bewebhusayithi abaye benza isenzo esibalulekileyo kuyo kwinani labo lilonke.
Ukubuza kukhuphiswano kuthetha iindleko eziya kufuneka zingene kwi-TOP yeli gama elingumgama.
Amagama aphambili kunye nokuhamba kwawo rhoqo
Imibuzo yomsebenzisi ihlala yahlulwe yangamaqela ama-3:
Imibuzo ephezulu kakhulu-kweyona nto iqhelekileyo, esetyenziswa ngabantu abangaphezulu kwama-5,000 ngenyanga. Xa ukuthandwa kuphezulu, ke ukukhuthaza okusebenzayo kusebenza, kodwa kufuna umsebenzi omninzi, njengoko kukho ukhuphiswano oluninzi.
Imibuzo ephakathi rhoqo- iyathandwa, kodwa ayifani kuneyona iphakamileyo. Isalathiso esiqhelekileyo: Abasebenzisi abayi-1,000-5,000 ngenyanga.
Imibuzo ephantsi rhoqo- eyona iqhelekileyo (ukuya kuthi ga kwi-1000 ngenyanga).
Uhlalutyo kunye nokukhethwa kwamabinzana aphambili kubaluleke kakhulu ekwakhiweni kwesiseko sewebhusayithi. Isiseko se-semantic sibonisa ukuba zingaphi iindwendwe zephepha elinikiweyo ezifunekayo ukuze ziyingenise kwi-TOP. Oku kuchaphazela ngqo ukulungiswa komxholo. Iingcali zethu ze-SEO zisebenzisa i-algorithm engqiniweyo ukunceda ukukhulisa iwebhusayithi. Iphepha eliphambili lenzelwe ukubuza imibuzo ephezulu kakhulu. Amacandelo aphambili akwimilinganiselo ephakathi kwaye amacandelo ajolise kwimibuzo ephantsi kakhulu.
Amanyathelo okujonga indawo
Xa ujonga ukulungiswa kwesiza, iingcali zeSemalt zichonga la manyathelo alandelayo:
Uhlalutyo lwesicatshulwa se-SEO;
Uhlalutyo lokugcwala kwesiza;
Uhlalutyo lwe-SEO lwabaqhudelwano;
uhlalutyo lwesiza se-SEO;
Uhlalutyo lonxibelelwano lwangaphandle kwindawo;
Uhlalutyo lwesakhiwo sewebhusayithi.
Uhlalutyo lwesicatshulwa se-SEO
Ngexesha lokuhlaziywa kwesicatshulwa se-SEO, iingcali zethu zimisela ukubaluleka kombhalo wephepha ngokusekelwe kumagama aphambili asetyenziselwa ukukhuthaza indawo kwiinjini zokukhangela. Uhlalutyo lwesicatshulwa kwimibuzo yokukhangela lukhethwe ngononophelo ngaphambi kokuba siqale ukukhuthaza umxholo. Siqala ngokwenza uhlalutyo olukhethekileyo ukuthelekisa iphepha elinyuselweyo okanye indawo yonke kunye nezinye iziphumo zokukhangela TOP. Emva koko, sithelekisa ubude besicatshulwa kunye nenani lamagama kwiziza zokhuphiswano ezinokubonakala okuphezulu. Oku kuvumela iingcali zethu ukuba zazi ukuba itekisi nganye kufuneka ibe nini. Ngelixa, akukho ndlela yokuqinisekisa iziphumo zokukhangela ze-TOP, ngokulungisa nje kuphela izikhombisi-ndlela eziphakathi sinokuphucula into ye-SEO yewebhusayithi.
Ngokuhlalutya isiseko sesiza sewebhusayithi, sinokuqonda ngcono ukuba mangaphi amagama abaluleke kakhulu avela kwisicatshulwa. Ukuba eli nani alifikeleli kwinqanaba elicwangcisiweyo, isicatshulwa kufuneka sihlelwe. Umntu akanakulungisa isicatshulwa ngokubona kwakhe ngaphandle kokuhlalutya uphendlo oluphezulu. I-injini yokukhangela iphakamisa amaziko e-TOP-10 ngokweekhrayitheriya ezithile kwaye oku kuya kuhlala kuthathelwa ingqalelo ngelixa ubhala. Ukusebenza ngezicatshulwa zekhasi kunye nokuthelekisa kunye nomxholo wabakhuphiswano kuya kukuvumela ukuba ujonge ukufaneleka kwiphepha elinikiweyo kwaye wenze uhlalutyo lwe-SEO kwimibuzo ephambili. Konke oku kuvumela ingcali yethu ukuba ifumane ulwazi malunga nendlela yokuphucula isikhundla sewebhu ngaphakathi kweziphumo zokukhangela zikaGoogle kunye nokwandisa ukubonakala.
Uhlalutyo lwe-traffic traffic
Uhlalutyo lwetrafikhi yewebhusayithi ikuvumela ukuba ufumanise ukuba indlela yokuhamba kwetrafikhi isasazwa njani, kunye nemithombo yezithuthi. Ngeli nqanaba, ukuthengiswa kweendlela zokuncintisana kwiiwebhusayithi zabahlaziyi kuyahlaziywa ukuze kuqondwe ngcono imakethi. Kolu hlobo lokuphinda uqalise ukusebenza, iinkonzo ezizodwa zisetyenziswa. Oku kusivumela ukuba sikhuphe ezi nkcukacha zilandelayo:
Inani leendwendwe ezizodwa;
Inani lokujonga iphepha ngeseshoni nganye;
Imithombo yezithuthi (ethe ngqo, yokudluliselwa, e-organic, ehlawulwa, kunye neyasekuhlaleni).
Uhlalutyo lokugcwala kwitrafikhi yindlela yokuvavanya ukugcwala kwabantu abakhuphisana nabo.
Uhlalutyo lwe-SEO lwabaxhasi
Nangona ukuqhuba uhlalutyo lwe-SEO yokhuphiswano lwewebhusayithi kungumsebenzi omkhulu, kukuvumela ukuba ujonge emva kwendawo yolu khuphiswano ukufumanisa ukuba:
isicwangciso sobuchule kukhuphiswano;
iindlela zokwandisa umxholo;
zihlala kangaphi kwaye zingaphi iisayithi ezinxibelelana nabakhuphisana;
Yintoni abanakho okhuphisana nabo ekungeyovenkileni yakho ye-Intanethi;
iimpazamo kwiiwebhusayithi ezikhuphisana nazo.
Ukuthelekisa indawo yakho kunye nabantu abakhuphisana nabo kukuvumela ukuba uqonde indlela onokuyiphucula ngayo indawo yakho. Ingcali ye-Semalt iya kufunda kwaye ibeke iliso kwiziza zakho zokhuphiswano ukuze ufunde ngakumbi malunga nemakethi yakho ye-niche kunye nokwandisa olo lwazi ukuphucula iziphumo zakho.
Uhlalutyo lobugcisa kwiwebhusayithi
Uhlalutyo lobugcisa bewebhusayithi lukudidi lohlalutyo olunzulu lwe-SEO. Ukuqhuba uhlalutyo lobuchwephesha kufuna amava amaninzi kwicandelo lokukhuthaza iwebhusayithi, ezo iingcali zikaSemalt zinayo. Eyona nto inzima kuhlalutyo lobugcisa kukutolika idatha. Uhlalutyo lobuchwephesha lwethu lubandakanya ezi ndawo zilandelayo:
Uhlalutyo lokwenziwa kwesalathiso sendawo sibonisa ukuba mangaphi amaphepha abandakanyekayo kukhangelo lukaGoogle. Ukuba i-injini yokukhangela ibone iphepha lakho ama-50, kwaye abantu abakhuphisana nabo banamaphepha angama-300, iwebhusayithi yakho ayinakuba nesikhundla esiphakamileyo kwiziphumo zokukhangela amagama aphuma rhoqo.
Uhlalutyo lokubonakala kwesiza sibonisa onke amagama aphambili ukuba isayithi ifuna ukuthatha isikhundla esikhokelayo kwiinjini yokukhangela. Esi sisixhobo esinamandla ukufumana ngokukhawuleza amagama aphambili ukukhuthaza kunye nokufumana amaphepha okhuphisana nawo.
Uhlalutyo lwegama eliphambili lesiza libandakanya ukuqokelela idatha efanelekileyo kwindawo yokhuphiswano, emva koko imibuzo ephambili ihlolisiswe ngononophelo, ihlolwe kwiimantane, zidityaniswe, kwaye zimiliselwe.
Uhlalutyo lomthwalo wesiza ulinganisa isantya somthwalo wesiza, emva koko uthelekiswa nendawo evela kwimiboniso ye-TOP. Le nkqubo ikuvumela ukuba ufumane amaphepha aneengxaki kwindawo yakho.
Uhlalutyo lokunxibelelanisa indawo lujonga ikhonkco ngaphakathi kwiphepha lesiza. Irobhothi yokukhangela inokubona amanye amaphepha esayithi ukuba amanye amaphepha anezibonelelo ezifanayo okanye iindawo ezingaphandle kolawulo zidibanisa kuyo. Ngamanye amaxesha, ukudibanisa okunobuchule kwanele ukuqhubela phambili isayithi ukuya kukhangelo lwe-TOP.
Uhlalutyo lwephepha eliphambili lesiza liyafuneka xa unyuselo luqhutywa kwimibuzo ephezulu kakhulu. Isizathu sesibini sovavanyo lwephepha eliphambili kukuqonda ngcono ukuba isisindo samaphepha sihanjiswa njani phakathi kwabakhuphisana nawe. Isizathu sesithathu kukufumana umhlaba oqhelekileyo phakathi kweziphumo eziphambili kunye namaphepha abo aphambili kunye nokuphumeza amacebo abo kwisitolo sakho se-intanethi.
Ukuthelekisa i-meta tags kwindawo yakho okhuphisana nayo kubalulekile ukuze ukhule. Oku kwenziwa ngokusebenzisa abakhwetha kwaye kuvumela, phakathi kwezinye izinto, ukubona iimpazamo kwindawo yakho, umxholo ongenakudityaniswa, ukuphinda uqondiswe kwakhona, kunye nekhonkco ezaphukileyo. Ukuba umntu uhlalutya i-meta tags ngendlela ekujoliswe kuyo nangeyona ndlela echanekileyo ngakumbi imibuzo ephambili iyafumaneka.
Uhlalutyo lonxibelelwano lwangaphandle kwindawo
Xa sihlalutya unxibelelwano lwangaphandle kwindawo, sifumana uluhlu lwayo yonke indawo kunye namaphepha adibanise iwebhusayithi yakho, kunye nee-anchs zexesha elimisiweyo. Olu hlalutyo luboniswa njengohlobo lwengxelo yohlobo lwetafile kunye negrafu yokunyuka kwesalathiso. Amakhonkco angaphandle kunye ne-backlinks sisihloko esithi "sine-beard" kwengxoxo phakathi kwee-SEO. Okwangoku, kukho uluvo lokuba akukho nxu lumano luya kunceda ukuba akukho siseko se-semantic kwaye imithetho esisiseko ye-SEO ayilandelwa.
Uhlalutyo lobume bemeko yendawo
Oku kubandakanya la manyathelo alandelayo:
ukwakhiwa kwesiseko se-semantic;
uthelekiso lweziphumo kunye nolwakhiwo lwangoku.
Ngokuhlalutya ubume besiseko sewebhusayithi, uya kuzisa onke amaphepha akho ngokulandelelana. Isakhiwo se-semantic ngumyalelo wokushicilelwa kwekhathalogu enomdla umsebenzisi kunye neenjini zokukhangela. Ngoku, amagama aphambili afakwa kwisakhiwo se-semantic yendawo. Ukwenza uhlalutyo lobume bembonakalo yendawo ngokobume bendawo, uhlalutyo lobume bendawo, uhlalutyo olusisiseko semantic, kunye nohlalutyo lweemantics xa zizonke kufuneka zenziwe.